टेन्सबर्ग कथा | Neer's Blog
← ए गाँठे !
Posted on July 20, 2017	by Neer
बख्खुमा चिटिक्क सजिएकी उनी छेउबाट जाँदै थिइन् । मैले रोकेर पत्रिकाको लागि आग्रह गरे । एकैछिनमा उनी पत्रिका लिएर आइन् । छेउकै सिटहरू खालि देखेर मैले अगाडि बस्न हुन्छ भनेर सोधे । उनले सहमतिमा टाउको हल्लाइन् ।
बिहीबार बिहान नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली-काठमाडौ आरए २०६ फ्लाइट निश्चित समयभन्दा अघि नै उडानका लागि रनवेमा तयार थियो । तथापि एयर ट्राफिकले गर्दा १० मिनेटभन्दा बढी कुर्नुपर्यो । यसै समयमा एयर होस्टेसलाई मैले पत्रिकाको लागि अनुरोध गरे ।
विमान आकाशमा स्थिर भएपछि एयर होस्टेसले खाना बाँड्न सुरु गरिन् । म भने बियर पिउने कि नपिउने भन्नेमा अलमल थिए । प्राय: दिउँसोको उडानमा म बियर पिउन रु‍चाउँछु । अघिल्लो रात राम्रोसँग निद्रा नलागेकोले नपिउ भन्ने लाग्यो ।
खानासँगै पेय पदार्थ सर्भ गर्ने ट्रेमा मलाई मनपर्ने कार्ल्सबर्ग बियर देखेर मेरो निर्णय बदलिन एक सेकेन्ड पनि लागेन । मैले तुरुन्त बियर मागे । खाना खानुअघि बियर गिलासमा खन्याए । एक चुस्की लिए, आँत र आन्द्रा दुवै भिजायो ।
तर कार्ल्सबर्ग बियरको भन्दा फरक स्वाद भएपछि म बियर क्यान नियाल्न थाले । उस्तै रङ्ग, डिजाइनको क्यान बुटवलमा प्याकेजिङ गरिएको टेन्सबर्ग बियर पो रहेछ ! त्यो देखेर कार्ल्सबर्गकै नक्कल गरी बनाइएकोमा कुनै शङ्का रहेन । अलि कडा लागे पनि खानासँगै बियर सकाए ।
खानपिनपछि पत्रिका पढ्न निरन्तरता दिए । पत्रिका पढी सिध्याएपछि नेपाल एयरलाइन्सको इन-फ्लाइट म्यागेजिन शाङ्ग्रिला पल्टाउन थाले । त्यसमा रहेको क्रसवर्ड पज्जल भर्नलाई मलाई खुब मनपर्छ । १५ वटा शब्दमध्ये १३ वटा सजिलै भरे ।
बाँकी दुई शब्द भने जति प्रयास गरे पनि भर्न सकिन । सोच्दै गर्दा कतिबेला भुसुक्कै भए‌छु । दुई घण्टाको उडानमा दुई ओटा बियर खाए पनि ननिदाउने मलाई आज एउटै टेन्सबर्गले टेन्स बनाएछ ।
बिउझिँदा जहाज अवतरण भएर यात्रुहरू उत्रिन सुरु गरिसकेछन् । आफू बसेको लहरमा अरू यात्री नहुँदा झस्काउने पनि कोही थिएन । हतार हतार उत्रिन तयारी गर्दै गम्न थाले ।
बसको यात्रा भए त आफ्नो गन्तव्य छुटेर अघि नै पुगि सक्या हुन्थे होला । फेरि अर्को मनले सोच्न थाले – बसमा कसले सित्तैमा बियर खुवाउँथ्यो र ! तर उत्रिदैँ गर्दा पज्जलमा दुई ओटा शब्द भर्न नसकेकोमा भने थकथकी भइरह्यो ।
This entry was posted in Experiences, Story and tagged Nepal Airlines. Bookmark the permalink.